Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » United Airlines manome kilometatra an-tapitrisany amin'ny mpiasan'ny fahasalamana
Ny fifaninanana dia hahafantarana mpiasan'ny fitsaboana efatra mendrika amin'ny iray tapitrisa kilaometatra avy
United Airlines mankalaza ny 40th tsingerintaona nahaterahan'ny programa MileagePlus tamin'ity volana ity
MileagePlus dia nivoatra mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpikambana ao amintsika izay miovaova hatrany ary koa manome valisoa ny tsy fivadihan'izy ireo
United dia manome efatra tapitrisa kilometatra ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana ilaina
United Airlines mankalaza ny 40th tsingerintaona nahaterahana ny programa MileagePlus tamin'ity volana ity, ary ho fankalazana an'io vanim-potoana lehibe io dia manome efatra tapitrisa kilometatra ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana lehibe ny seranam-piaramanidina. Ny fifaninanana dia hahafantarana mpiasan'ny fitsaboana efatra mendrika amin'ny iray tapitrisa kilaometatra avy. Ho fanampin'izay, United dia mampiseho ny fankasitrahany ireo mpikambana ao amin'ny MileagePlus manerantany miaraka amin'ny varotra saran-dalana eto an-toerana sy iraisampirenena, fanomezana mpanjifa tsy ampoizina ary fampiroboroboana 10 manokana miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka MileagePlus.
"Nandritra izay efapolo taona lasa izay, MileagePlus dia nivoatra mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpikambana ao amintsika izay tsy miovaova ary manome valisoa ny tsy fivadihan'izy ireo", hoy i Luc Bondar, filoha lefitry ny varotra sy ny tsy fivadihana ary filohan'ny MileagePlus tao amin'ny United Airlines. “Izany no antony ankalazantsika an'ity dingana lehibe ity amin'ny alàlan'ny fanolorana doka ho an'ny mpikambana antsika mandritra ny Mey. Noraisinay koa ity hetsika ity hanombohana ny fifaninanana hanehoana fankasitrahana ireo mpiasan'ny fahasalamana izay niaro ny vondrom-piarahamoninay nandritra ny areti-mandringana. ”
Fifaninanana mpiasan'ny fahasalamana tena ilaina
Manomboka izao ka hatramin'ny 17 Mey 2021, ny mpanjifa dia asaina manendry izay mpiasan'ny fitsaboana lohalaharana any Etazonia izay miakatra etsy sy eroa mba hanao fiovana ho an'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo ary maneho ny soatoavin'ny United United, anisan'izany ny:
Safe: Izy ireo dia manao an'izao tontolo izao ho toerana azo antoka kokoa ho an'ny olona rehetra manodidina azy.
Miahy: Mampiseho fankasitrahana ny mpikambana rehetra ao amin'ny fiarahamonina misy azy ireo izy ireo amin'ny fandraisana azy ireo, tsara fanahy ary mangoraka.
Azo ianteherana: Izy ireo no olona azonao ianteherana amin'ny zavatra rehetra, na lehibe na kely.
Voafaritra (Mahomby): Izy ireo dia mitazona ny fandehan-javatra na dia mihasarotra aza ny fandehanana.
Ny fandefasana dia hojeren'ny mpitsara mpitsara manamorona an'i Dr. Pat Baylis, talen'ny fitsaboana any United, Luc Bondar, ary Dr. Jim Merlino, tompon'andraikitra ambony amin'ny fiovan'ny klinika ao amin'ny Cleveland Clinic. Mpandresy efatra no holazaina amin'ny volana Jona ary samy hahazo MileagePlus kilometatra 1 tapitrisa, izay tsy lany daty toy ny kilometatra MileagePlus rehetra, mamela ireo maherifo ireo hamandrika ireo sidina ho any amin'ny toerana mihoatra ny 1,000 rehefa vonona ny handeha izy ireo. Ny fifaninanana no fomba farany nanehoan'ny zotram-piaramanidina fanampiana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana mandritra ny areti-mandringana; tao amin'ny 2020, United dia nanidina mpiasan'ny fahasalamana maherin'ny 3,000 tany amin'ny toerana mafana manodidina an'i Etazonia sy Guam mba ho eo amin'ny laharana voalohany amin'ny ady COVID-19.